०९ माघ २०७५, बुधबार
काठमाडौँ, २० पुस । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिए पनि तारकेश्वर नगरपालिकाको पुनःनिर्माण गति भने सुस्त छ । नगरपालिका जम्मा २० दशमलव ५९ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्रै घर निर्माण सकाएर तेस्रो किस्तावापतको रकम लिइसकेका छन् । नगरपालिकामा पुनःनिर्माणका जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या ६१५१ लाभग्राह..
काठमाडौँ, २० पुस । मुहानदेखि नै उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत बाग्मती नदीलाई सफा बनाउ..
उपयोगविहीन न्यायिक इजलास
बाँके, २० पुस । बाँकेका स्थानीय तहले निर्माण गरेका न्यायिक इजलास प्रयोगमा आउन सक..
वाइड बडी खरिद प्रकरणमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन हुने
काठमाडौ, २० पुस । वाइड बडी खरिद प्रकरणमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन हुन..
काठमाडौँ, २० पुस । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ ..
पर्वत, २० पुस । जन्म दिने बाबुको अकालमै मृत्यु हुनु र आमा दोस्रो विवाह गरी गएपछि उनीहरूले जन्म दिएका बालबालिकाको अवस्था कस्तो होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ, निकै दयनीय । यहाँको एक दलित समुदायका तीन बालक यस्तै बिचल्लीमा परेका छन् । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीस्थित छेउखन्नाका धनबहादुर दमैका तीन छोरा बिचल्लीमा परेक..
आश्रमबाट आनीहरु बेपत्ता भएपछि रामबहादुर बम्जनमाथि सिआइबीले थाल्यो अनुसन्धान
काठमाडौ, २० पुस । लिटिल बुद्धु दाबी गर्दै आएका रामबहादुर बम्जनमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । बम्जनको आश्रममा गएका अनुयायीहरु बेपत्ता भएको खबर सेतोपाटी डट कमले बाहिर ल्याएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोली बम्जनको आश्रमस्थल सिन्धुपाल्चोक पुगेको सिआइबीका डिआइजी..
डिभोर्स भएपछि रविले भने -सबैको भाग्यमा माया, परिवार र सुख लेखिएको हुदैन रहेछ
काठमाडौ, २० पुस । चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पत्नी ईशासँग वैवाहिक सम्वन्ध टुंग्याएका छन् । ईशासँग रविले केही दिनअघि मात्रै डिभोर्स गरेका हुन् । रवि र ईशाका दुई छोरी छन् । दुबै छोरीको जिम्मेवारी आफूले लिएको रविको भनाइ छ । रविले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यसो भने – श्रीमान, म जीउँदै छु… नचाहदा नचाहदैपनि आफ्नो ब्यक्त..
गौशाला, २० पुस । महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका–८ बजराहीमा वन माहुरीले टोक्दा एक महिलासहित चारजना गम्भीर बिरामी भएका छन् । वन माहुरीले टोक्दा बजराहीका ४५ वर्षीया शलतियादेवी साह, ४० वर्षीय मोहन साह, १४ वर्षीय अहमद अन्सारी र १३ वर्षीय सागिर राइन गिम्भीर बिरामी भएको स्थानीयवासी महेन्द्र साहले बताउनुभएको छ । चारै जनाको उपचार जि..
कर्णालीका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न ७० लाख
सुर्खेत, २० पुस । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुर्खेतद्वारा दैलेख र सुर्खेतमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य प्राविधिकसँग बिहीबार आयोजित जुनोसिस रोगसम्बन्धी जनचेतनामू..
परासी, २० पुस । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–२ की २१ वर्षीया कमला चौधरीको आफ्नै श्रीमान्ले हत्या गरेको खुलेको छ । कमला गत पुस ४ गतेबाट हराइरहेकी थिइन् । उनका श्रीमान सुनिलले आपसी मनमुटावका कारण श्रीमतीको आफैँले हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । उनको..
काठमाडौँ, २० पुस । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१६ सतुङ्गलमा बिहीबार साँझ ७ बजेदेखि लागेको आगो आज बिहान ४ बजे नियन्त्रणमा लिइएको छ । नेपाली, सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो । दीपक कपास उद्योगबाट शुरु भएको आगो नजिकैकै आनन्द ट्रेड कन्सर्नमा पनि सल्किएपछि त्यहाँ भएको रसायनका कारण आगोले ठूलो रूप लिएको थियो । थानकोट..
चन्द्रमाको पल्लो छेउको सतहमा पहिलोपटक यान अवतरण
काठमाडौ, २० पुस । चिनियाँ यान पहिलोपटक चन्द्रमाको रहस्यमयी खाडलको सतहमा अवतरण गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । चीनको अन्तरिक्ष एजेन्सीले बिहीबार स्थानीय समयअनुसार बिहानको १० बजेर २६ मिनेटमा चाङ ई—४ नामको यान अवतरणको औपचारिक घोषणा गरेको हो। यान पृथ्वीबाट टाढा पर्ने पल्लोछेउको खाडलमा अवतरण भएपछि चिनियाँ राष्ट्रिय अन्तरिक..
भद्रपुर, २० पुस । झापा गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि नै ६० वर्ष माथिका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षावापत मासिक रु ५०० का दरले भत्ता दिँदै आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलेन्द्र दङ्गालले बताउनुभयो । “एकल महिलाजस्तै एकल पुरुषलाई पनि समस्या हुन्छ”, उहाँले भन्..
जबर्जस्ती करणी अभियोगमा ७५ वर्षे वृृद्ध पक्राउ
चितवन, २० पुस । पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा १५ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा रत्ननगर नगरपालिका–११ मङ्गलपुरका ७५ वर्षीय सुकवीर तामाङ पक्राउ परेका छन् । पीडित किशोरीको जाहेरीबमोजिम ती वृद्धलाई नियन्त्रणमा लिइएको टाँडीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीले बताउनुभयो । बुधबार पीडित किशोरी..
रत्ननगर, २० पुस । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवन शाखाले भरतपुर नापी कार्यालयका एक कर्मचारीलाई रु २० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ । पक्राउ परेका उक्त कार्यालयका नापी अधिकृत राजेश कर्माचार्यले बिहीबार भरतपुर महानगरपालिका–१० हाकिमचोकका विष्णु पौडेलको जमीन कित्ताकाट गर्ने क्रममा घुस मागे..
वाणिज्य बैंकको ब्रान्ड एम्बासडरमा मिस नेपाल खतिवडा
सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडालाई ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ पुस्तालाई बैंकप्रति आकर्षित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ मिस नेपाल खतिवडालाई ‘ब्रान्ड एम्बासडर’मा नियुक्त गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृ..
कालिका लघुवित्तको ७५% हकप्रद शेयर प्रस्ताव
पुस १९, काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पूँजी वृद्धिका लागि ७५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको पुस १८ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. [&he..
काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्रतिकित्ता ५६२ मा मूल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीले २० प्रतिशत शेयर लाभांश दिने प्रस्ताव गरे लगत्तै मूल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीको औसत आधार मूल्य रु ७३७ रहेको छ । यस्तै हालै मात्र साधारण शेयर बिक्री गरेको चौतारी लघुवित्त वित्तीय [&helli..
काठमाडौँ, १८ पुस । धितोपत्र बजारमा आज पनि शेयरको मूल्य घटेको छ । लगातार घट्दै आएको बजार आज पनि पाँच दशमलव ४२ बिन्दुले घटेर एक हजार १८० दशमलव ४३ बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत १ दशमलव २८ बिन्दुले घटेर २५० दशमलव ५३ बिन्दुमा झरेको छ । नेपाल […]
भेरीगङ्गा, १८ पुस । बाहिर कठ्याङ्ग्रिँदो ठण्डी । भित्र बाफिलोे गर्मी । लगातार काम गर्दा खल्खल्ती पसिना आउनु स्वभाविकै हो, त्यो भन्दा बढी ज्यानकै जोखिम मोलेर राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा गर्न प्रविधिज्ञ र मजदूर खटिइरहेका छन् । सुरुङभित्र हरेक दिन दिउँसो १ देखि बिहान ७ बजेसम्म र बिहान ७ देखि साँझ [..
काठमाडौँ, १८ पुस । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी पक्षका मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा बहस गर्नका लागि सरकारी वकिललाई विषयगत रुपमा विशिष्टीकरण तालीम दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार सरकारी मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा बहस गर्नका लागि विशिष्टीकरणको तालीम दिइएको हो । अहिलेसम्म महान्यायाधिवक्ता कार..
न्यायिक समितिमा साँध–सिमानाका उजुरी धेरै
काठमाडौँ, १८ पुस . सामाजिक झै–झमेला हल र न्याय प्रदान गर्न स्थानीय तहभित्र बनेका न्यायिक समिति १८ महीना बित्दा पनि क्रियाशील देखिएका छैनन् । स्थानीयमा चेतनाको कमी, न्याय माग्ने प्रक्रियामा झन्झट र जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्न नसक्दा पछिल्लो समय उपत्यकाकै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कामविहीन जस्तै बनेका छन् । नयाँ बनेको नगरपालिका र ग..
वाइड बडी खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड घोटाला, मन्त्री अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस
काठमाडौँ, १८ पुस । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले निगमका दुईवटा वाइड बडी खरीदका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट वर्तमान वै..
देउवाले गरे संसदीय दलमा चार सदस्य मनोनीत
काठमाडौँ, १८ पुस । नेपाली कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टी संसदीय दलको कार्यसमितिमा चारजना सदस्य आज मनोनीत गरेका छन । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको सचिवालयका अनुसार सभापति देउवाले काङ्ग्रेस संसदीय दलको विधान संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०७४ को धारा १० को उपधारा २ ग बमोजिम उमेश श्रेष्ठ ललितपुर, डा डिला ..
हामीलाई केहि चाहिदैन, पार्टी सिस्टमले चल्नु प-यो:डा.विजय पौडेल, नेता नेकपा
तपाइ लगायत नेकपाका युवा नेताको अगुवाईमा असन्तुष्टीहरु सुत्रवद्ध गरी नेताहरुलाई बुझाउनु ..
० तपाई उपाध्यक्ष भएर आइसकेपछि नियमित र परम्परागत कामभन्दा के फरक कामको सुरुवात गर्नुभएक..
सदनमै नजाने भए देउवाजी किन दलको नेता बन्नुभएको ? चन्द्र भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
महाधिवेशन भएयता नेपाली कांग्रेसका हरेक निर्णय निक्कै विवादास्पद भएका छन् नि ? कुनै पनि ..
शुक्रबारदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट श्रम स्वीकृति
काठमाडौँ, ९ माघ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले ..
मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान नदिए बसेकै ठाउँबाट विद्येयक पारित हुन्छः योगेश भट्टराई
काठमाडौ, ९ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद योगेश भट..
जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
सुर्खेत, ९ माघ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विभागीय मन्त्रालयक..
समानुपातिक विज्ञापनका लागि सञ्चारमन्त्री सक्रिय
काठमाडौ, ९ माघ । पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा फड्को हान्दै सञ्चारमन्त्री बन्न सफल ..
काठमाडौँ, ९ माघ । सातै प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न काठमाडौँमा ‘नेपाल उद्यमशी..